ZTE Axon9Pro ၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် Androidsis
ZTE Axon9Pro နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်
လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က ZTE သည် IFA 2018. တွင်ရှိတော့မည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်သည်ဖုန်းအသစ်ဖြစ်သော Axon9ကိုဘာလင်တွင်ပြုလုပ်မည့်ပွဲတွင်ပြသမည်။ ဒီမော်ဒယ်အသစ်ကိုကြေငြာကတည်းကဒီမော်ဒယ်ကဒီအကွာအဝေးမှာရှာတွေ့သောတစ်ခုတည်းသောမဟုတ်ပေမယ့်။ ဒါက Axon9Pro ပါ, သြဂုတ်လ၏ယခုလကုန်မှာတင်ဆက်ခံရဖို့မျှော်လင့်ရသည်သော။
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကုမ္ပဏီကမှတ်ပုံတင်ထားသောမော်ဒယ်အသစ်။ အခုငါတို့ကြားမှာရှိနေပြီ ZTE Axon9Pro ၏နောက်ဆုံးဒီဇိုင်း။ ဤပုံရိပ်များ၏ကျေးဇူးကြောင့်ဤပုံစံသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဘယ်အရာပြင်ဆင်ပေးသည်ကိုတွေ့နိုင်သည်။
တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်ထုံးစံအတိုင်းကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည် notch ရှိသောဖုန်းကိုရွေးချယ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ငါတို့ရှေ့မှာရပ်တယ် Screen ကိုထူးခြားစွာလွှမ်းမိုးထားတဲ့ Notch ကြီးတစ်ခု ကိရိယာ၏။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို iPhone X. ကမှုတ်သွင်းဒီဇိုင်း
ZTE Axon9Pro ၏နောက်ကျောတွင်ကင်မရာနှစ်လုံးတွေ့ရှိရသည်, ဒေါင်လိုက်နေရာချထားပြီး။ ကင်မရာအောက်မှာ LED flash ကိုတွေ့တယ်။ ထို့အပြင်ဖုန်း၏လက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာသည်နောက်ဘက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုစောင့်ကြိုနေသည်။ များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးကွက်တွင်မြင်နေရသည့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဒီကိရိယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမသိသေးပါဘူး။ ZTE Axon9Pro ကိုကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပြီးလအနည်းငယ်အကြာတွင်ယခုအချိန်အထိအသေးစိတ်မသိရှိရသေးပါ။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က၎င်း၏ဒေတာရှိသည်ဖို့သူ့ရဲ့တင်ပြချက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်ပုံရသည်။
ကောင်းမွန်တဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကတော့မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း ZTE Axon9Pro ရောက်ရှိမယ့်အချိန်အထိကြာမြင့်စွာမစောင့်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီလနှောင်းပိုင်းတွင်တင်ပြပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်နောက်အပတ်မှာတရားဝင်ဖြစ်သင့်ပြီ ကုမ္ပဏီမှအတည်ပြုချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေပါတယ်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ZTE သည် » ZTE Axon9Pro နောက်ဆုံးဒီဇိုင်းကိုဖော်ပြခဲ့သည်